गोरखामा अझै कायम छ तान्ने प्रथा, किशोरी असुरक्षित !::Nepali News Portal from Nepal
गोरखामा अझै कायम छ तान्ने प्रथा, किशोरी असुरक्षित !
बिही (गोरखा), ४ बैशाख – ‘केही दिनअघिको घटना हो, राति साढे ९ जति बजेको थियो होला । बहिनी र म गफ गर्दै सुतिरहेका थियौं । एक्कासि कसैले ढोका ढक्ढक्यायो । हामी आत्तियौं । मैले डराई–डराई ‘को हो’ भनें । बाहिरबाट केटा मान्छेले ‘म हो, रक्सी खान आएको’ भन्यो । ‘हाम्रो त रक्सी बेच्ने घर होइन’, भनें । ‘माथिल्लो घरको दाइ हो क्या म, ढोका खोल्’ भन्यो । अनि मैले बिस्तारै ढोका खोलेर हेरेको मात्र थिएँ, क्य्राक गाउँको केटा रहेछ । घरभित्र छिर्‍यो र मेरी बहिनीलाई जबरजस्ती तानेर बाहिर लग्यो । बाहिर उसको गाउँका केटा टन्नै रहेछन् । त्यसपछि मैले आमा र भाइलाई बोलाएँ । हामीले यतातिर, उनीहरूले उतातिर, एकछिनसम्म बहिनीलाई तानातान भयो । भर्खरसम्म सँगै सुतिरहेकी बहिनीलाई उनीहरूले तानेर लगे । आमा र भाइ धेरै टाढासम्म पछिपछि गएर केके समझदारी गरेर बहिनीलाई छुटाएर ल्याए । अहिले बहिनी भागेर काठमाडौं गएकी छ । उतै काम खोज्दै होली ।’
ह्यास ट्याग मीटु प्रयोग गर्ने दुनियाँलाई यो एकादेशको कथा जस्तो लाग्न सक्छ । तर, यो राजधानीबाट १४२ किलोमिटर पर गोरखाका ५० देखि ५५ कोस टाढा रहेका हिमाली गाउँको ताजा घटना हो । लामो समय लेबनान बसेर फर्केकी सोही ठाउँकी अर्की किशोरीलाई पनि केही समयअघि यसैगरी स्थानीय एक युवाले तानेर लगे । उनी उम्केर भाग्न सकिनन् । केही दिनसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्नुपर्‍यो । अनि दाजुभाइको साझा दुलही भइन् । घरबाट भाग्ने मौका पाएपछि काठमाडौं गइन् । उतैबाट विदेश लागिन् ।
तानेर विवाह गर्ने चलनलाई संस्कृतिका रूपमा पनि लिन सकिने यस क्षेत्रका पढेलेखेका युवाको भनाइ छ । ‘हाम्रो गाउँमा कि मागी विवाह हुन्छ, कि तानी विवाह हुन्छ’, प्रोकका निमा लामा भन्छन्, ‘प्रेम विवाह गर्ने चलन छैन । त्यसैले मिलेमतोमै केटाले ताने जस्तो गर्ने, केटीले नमानेको जस्तो गर्ने चलन छ ।’ तानेर बिहे गर्ने चलन कायम राख्न पनि तानेको अभिनय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘केटा र केटीको माया प्रेम बसेको हुन्छ । बाआमासँग कुरा गर्दा मिल्दैन अनि केटाले तानेर लगे जस्तो गर्ने चलन पनि छ’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा देख्नेलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्‍यो जस्तो पर्छ । तर, सहमतिमै भएको हुन्छ ।’परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको परम्परालाई सिरानी हालेर कतिपयले जबरजस्ती तान्ने गरेको उनी स्वीकार गर्छन् । ‘कतिपय केटाहरूले चाहिँ परम्पराको बद्नाम पनि गरेका छन्’, निमा भन्छन्, ‘कुनै केटी आफूलाई मन पर्‍यो भने उसले आफूलाई मन नपराएको भए पनि तान्दिने चलन छ । योचाहिँ विकृति हो ।’
शिक्षा र चेतनाको विकाससँगै साविक सामागाउँ, ल्हो, प्रोक र सिर्दिबास गाविसमा क्रमशः हट्दै गएको छ । तानेर विवाह हुने गरे पनि त्यहाँका अगुवाहरू ‘त्यस्तो चलन हटिसक्यो’ भन्न रुचाउँछन् । तर बिहीमा भने अधिकांश विवाह तानेरै हुने गरेको छ । ‘यस्तो चलन राम्रो होइन’, वडाध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन भन्छन्, ‘तर अहिल्यै हटाइहाल भनेर आदेश दिन पनि गाह्रो छ । म अब छिट्टै आम भेला राखेर तानेर जबरजस्ती विवाह गर्ने नियम बन्द गर्न आग्रह गर्छु ।’ जबरजस्ती गरेको विषयमा प्रशासनमा उजुरी गर्ने चलन नभएको उनले बताए । ‘गाउँमा राम्रोसँग छलफल गरेर चलन हटाउन सकिएन भने कानुनी कारबाही गर्न बाटो खुला गर्छु । कानुन पल्टायो भने त धेरै ठूलो कारबाही छ ।’
मञ्जुरीबिना विवाह गर्ने–गराउनेलाई कानुनले दण्डजरिबानाको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ७२ मा महिला वा पुरुष जो कसैको मञ्जुरी नभई भएको विवाह बदर गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७२ ले मञ्जुरीबिना विवाह गर्न नहुने र कसैले गरे–गराएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ कै दफा ३२ ले मञ्जुरीबिना विाह गरेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गरेको छ । अन्नपूर्णपोष्ट
राष्ट्र हितमै रहेर एमसिसि बारे निर्णय हुन्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ
भीमापोखरामा प्रगति सहकारीको सेवा केन्द्र, उत्पादनमा लाग्न जोड
पोखरा म्याराथन प्रदेशको समृद्धी संग गाँसिएको छ : मन्त्री लम्साल
अबको ध्यान समृद्धिका लागि : अध्यक्ष थापा
एक्यापलाई संघीयताको मोडलमा ल्याउन मुख्यमन्त्री गुरुङको प्रस्ताव